Takunda! | Martech Zone
Nyamavhuvhu apfuura Ndanyora nezve yangu basa idzva at Patronpath. Uku kwave kunetsa kwemwedzi misere kuPatronpath asi iro bhizinesi riri kuzviratidza pacharo nekudzokorora. Yedu yekutanga kota yaive yakakura kudarika gore rapfuura uye vatengi vedu vane mbiri-manhamba kukura mukati vachishandisa edu ekutengesa uye ecommerce mhinduro.
Nezuro manheru, takakunda iyo Mira Mipiro yeIndiana's Information Technology Gazelle Kambani!
Chikamu chakaomesesa cheyedu kuedza, kusvika kure, kusangana neRestaurant POS masisitimu. Kune vashoma chete muindastiri vari kushandisa mari pahunyanzvi hutsva - mazhinji acho achiri munyika yemabatch mafaira, Access Databases uye kunyange FoxPro. Tine hurongwa hukuru munzvimbo yekuzadzisa izvi izvo zvisina kufanana nemimwe mhinduro uye tinodada nekubatanidzwa kwedu kwePOS.
Isu zvakare tine angangoita akawanda mukuita kwedu fanera sezvatinoita! Izvo zvakandiwanisa kushanda nguva yekuwedzera pane otomatiki uye kurerutsa kuita. Ndatenda kunaka kwedu tine timu huru kuPatronpath. Mark Gallo, Mutungamiri, anonzwisisa iyo indasitiri mukati nekunze. Chad Hankinson ndiye mutengesi akanakisa wandati ndamboshanda naye - haambomira kana kutengesa kwaitwa - anoenderera mberi achishanda nevatengi vake mukuita kwavo uye nekunze. Vashandi vedu vachangopfuura ndiTammy Heath, Manager weAccount, naMarty Bird, Director weKushambadzira.
Tammy ndiye anonakidza Account Manager uyo ane hanya nevatengi vake. Marty anga ari godend kwandiri, pachangu, sezvo akaronga uye akavaka edu emaimeri ekushambadzira zvirongwa uye ari kushanda kugadzirisa mashandiro edu emukati nekushandisa Salesforce pamwe nemidziyo yedu yazvino, Google Apps uye ExactTarget.
Chikwata hachigumire ipapo, futi. Kristian Andersen uye Vanoshamwaridzana vatipa isu ne hunotyisa huvepo pamberi uye mhando. Uye isu tinoramba tichiwana kuenderera mberi kubvunzana kubva kubhodhi redu - vanomhanya mabhizinesi senge Autobase, HutanoX, Yekutanga Internet Bank uye RICS Software.
Press Pressure: Patronpath Anohwina Techpoint MIRA Mubairo
Tags: kutsvaga kwekutenga kwemunoMediaMedia Valleymilokutora miloSilicon ValleySilicon Valley Watcherslideshare linkskutanga kwevhiki
2008 NRA Tech Pavilion Yakakwidziridzwa neDhijitari Displays
May 17, 2008 pa 3: 58 PM
Douglas, makorokoto! Ini ndashanda muPOS chinhu uye ndinoziva kuoma kwazvo kuti ndikwanise kuonga mubairo uyu uye kuti zvinorevei kukambani…
May 17, 2008 pa 8: 35 PM
Woo-Hoo! Mubairo unotyisa uye unokodzera, Doug. Kusangana newe kuNRA yaive nzvimbo yepamusoro yezuva kuchikwata cheKwingo.
Vamwe vedu tinogadzira zvinhu zvisina maturo; vamwe vedu tinogadzira Zvinhu Zvinobatsira. Iwe unogadzira Unobatsira Zvinhu - zvakanaka pa ya
May 18, 2008 pa 10: 10 AM
Makorokoto! Zvinonzwika sekuedza kwako kwakabhadharwa.
May 18, 2008 pa 1: 49 PM
May 18, 2008 pa 11: 03 AM
Makorokoto Doug! Icho chiitiko chinoshamisa!